November protagonist nke akwụkwọ. Fọdụ utu aha raara nye ọnwa a | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ ndị ntorobịa, Novela, Black akwụkwọ
November, autumnal ọnwa par kacha mma, bụ protagonist nke ụfọdụ utu aha nke akwukwo site na oge di iche iche na ndi dere akwukwo Ebe ọ bụ na akwụkwọ nwa, ugbu a ma ọ bụ nwata, Nọvemba na-apụtakarị ebe gara aga ma ọ bụ nke dị mma maka akụkọ dị mma. Ka anyị chọpụta akụkọ ndị a.
1 Bọchị iri na ise nke Nọvemba - José Luis Correa
2 Kacha ọhụrụ na November - Hans Enrich Nossak
4 Kate nke November - Mónica Gutiérrez
5 Nọvemba - Jorge Galán
Bọchị iri na ise nke ọnwa Nọvemba - Jose Luis Correa
Edere ya 2003, onye edemede José Luis Correa na-akọ akụkọ banyere Richard White, onye dị afọ 44, jisiri ike iduzi ndụ enweghị nzube nke na-agba n'obodo ya, Las Palmas de Gran Canaria, a onye nyocha. Ọrụ nke nwanyị mara mma nyere ya ka ọ nyochaa o yiri ka igbu onwe ya nke enyi ya nwoke ga - akpọrọ ya banye ụwa abụọ mara mma dịka ha dị egwu. Ogwe mmanya na abalị, njem ụgbọ mmiri na nnọkọ oriri nke umu oma si Las Palmas, na ịrata ndị ahịa ya pụtara.
Kacha ọhụrụ na November - Hans Enrich Nossak
E jirila ọrụ onye ode akwụkwọ German a tụnyere nke nke Albert Camus, George Orwell ma ọ bụ onye agbata obi ha Günter Grass. N'ime afọ iri isii na asaa wee sụgharịa akwụkwọ ọgụgụ atọ a kacha mara amara n'asụsụ Spanish, otu n'ime ha bụ nke a, site na 1968. Na 1961 ọ natara Onyinye Büchner, na mgbe afọ ole na ole gasịrị, a ga-akpọ ya Onye otu ulo akwukwo German nke Asusu na akwukwo.
Nke a na akwụkwọ mejupụtara atọ ogologo isi. Na nke mbụ, onye protagonist na-agwa onye mbụ otú o si kpebie na mberede iji kọwaa onye edemede na-adịghị mma nke ya ka zutere. N'ịbụ onye omume rụrụ arụ ya masịrị, njedebe na mgbochi nke ndụ ezi uche na ikike nke nwanyị bourgeois na nne nke ezinụlọ nwere obi ụtọ ọ na-edu pụtakwara. Na nke abụọ isi, na mkparịta ụka ogologo oge ya na nna nwunye ya, bụ onye bịara ileta ya na ebe obibi ọhụrụ ya, na-akọghachi ihe ọ pụtara nzuzu ya na odida nke ya hapụ ntọhapụ.
Y ke akpatre, ọzọ n'ụlọ di ya, e nwere ọnọdụ dị ike karịa uche ya nke ga-eduga ya ịlaghachi ọzọ n'ụgbọ ala nke onye ọ hụrụ n'anya, onye gara ilegharị anya maka onye mmanya na-egbu ya n'ụlọ ya, na mgbe nkeji oge gachara ha abụọ ga-anwụ. Maka nke ya iwu, e weere akwụkwọ a otu n'ime - isi akwukwo nke akwukwo akwukwo, ma ọ dịkarịa ala site na German.
November igwe ojii - Hillary Ruben
Ihe na 2002, nke a bu akwukwo banyere obi ike, imeziwanye onwe ya na ịhụnanya nke ụmụ anụmanụ. Na-agwa anyị akụkọ banyere konyek, onye na-eto eto na-azụ atụrụ si na agbụrụ Maasai, onye na-ese onyinyo ọtụtụ puku ihe omume. Ruo otu ụbọchị, na-azụkọta ìgwè atụrụ ya na nwanne nwanne ya Parmet, ọ na-ata ahụhụ ya mwakpo nke ụfọdụ ndị dike ma merụọ ahụ. Nwa nwanne nna ya gbahapụrụ ya wee laghachi n’obodo nta ahụ, na-agwa na Konyek agbaala ọsọ ma hapụ ìgwè ehi ahụ naanị ya. Konyek na-arụ ọrụ ahụ chọọ ya nwa ehi November Cloud, furu efu mgbe agha ahụ gasịrị.
Mgbe ọtụtụ ihe egwu na ihe egwu ọ hụrụ ya na, mgbe laghachi n'ime obodo, ọ ga-aga site na ikpe nke ndị okenye. Will ga-enwe ike imeri ya n'ihi obi ike na ọgụgụ isi gị. Na nna ya, iji mata uru ọ bara, na-enye Nube de Noviembre.
Kate nke Nọvemba - Monica Gutierrez
Ihe na 2016, akwukwo a bu setịpụrụ na England. N'abalị nke a snow mmiri ozuzoNa Fraịdee n'azụ ụgbọ mmiri ndị na-apụnara mmadụ ihe nke ụlọ zoro ezo, onye na-azụ ahịa na-echere ọbịbịa Kate. Kate bụ nwatakịrị nwanyị nwere ntutu dị iche iche na - acha uhie uhie na akwa ogologo.
Kate bi n’otu ụlọ ochie. Ogologo oge a kemgbe ọ na-ebugharị ya echetakwala echiche nke obere nkọwa ma ọ bụ ihe omimi zoro ezo na elu ugwu dị ịtụnanya kwa ụbọchị. Ogige dị egwu na ụlọ ọrụ redio nke gbakọtara na mbara igwe n'elu ụlọ osisi bụ ebe mgbaba ya maka ọdịda ahụ. Ọ bụ ezie na n'obodo nta nke Coleridge, onye ọ bụla leghaara ịdọ aka ná ntị nke eccentric meteorologist, oge na-aga ịgbanwe Kate n’ọnwa Nọvemba n’aka nwoke nwere atụmatụ imegwara.
E bipụtara ya na 2016, nke a bụ akụkọ gosipụtara mkpa ọ dị iweli olu gị elu, dị ka ndị Jesuit gburu, na-agbachitere ndị kachasị nsogbu. Na 1989 the Obodo Salvadoran bi na egwu nke agha obodo. Otu ajọ ụtụtụ na November otu ìgwè nke ndị ikom ji egbe abatakwa akụrụngwa nke Mahadum Katọlik na gburu mmadụ isii ndị Jesuit ndị Spain na ụmụ nwanyị abụọ Obi jụrụ oyi.
N'ụbọchị ndị sochiri mgbukpọ ahụ, ọ bụ naanị rector ọhụrụ nke ndị Jesuit, nna Tojeira, na-agba mbọ ma na-etinye aka chọpụta ndị na-egbu ya. Naanị onye akaebe nke ahụ nwere ike inye aka dozie ikpe ahụ bụ mechie ọnụ ndị ọchịchị. Whonye bụ ndị na ndị omekome na-erubere isi?
Anyị nwere aka anyị a obi ike akwụkwọ na-enyocha ihe eziokwu dị egwu na-awụ akpata oyi n'ahụ El Salvador na Latin America na 1989. Ọ na-abanyekwa n'akụkọ ihe mere eme nke mpụ ndị ọzọ, dị ka nke Onye ndu Romero.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » November protagonist nke akwụkwọ. Titlesfọdụ utu aha raara nye ọnwa a